Suede Leather Fekitori, Vatengesi - China Suede Leather Vagadziri
Microfiber suede dehwe inosanganisa zvakanakira dehwe uye jira, ichipidigura tsika yechinyakare yekuti dehwe rakakwirira kupfuura zvese zviri mupfungwa dzevatengi, kududzira zvekare machira ekugadzira, kuunza maitiro matsva ehunhu-hwepamusoro, hupenyu husina zvakatipoteredza.
Microfiber Suede Leather Chinyorwa cheCar Seat Cover uye Auto Yemukati
Iyo polyester microfiber inogadzirwa naBensen ine manzwiro akafanana neaya akadonhedza dehwe, asi harisi reganda chairo, asi microfiber inogadzira dehwe.
Nonwoven Microfiber Suede Eco Synthetic Leather yeMotokari Yemukati
Iyo microfiber suede inogadzirwa naBensen haina DMF mukuyedzwa kwenzvimbo. Izvo ndezve zvizere mvura-yakavakirwa zvigadzirwa, zvechokwadi hazvikuvadze hutano hwevanhu, hapana kusvibiswa kune zvakatipoteredza.
Yakanakisa Yemhando Suede Leather yeMota Yemukati Kushongedza
Microsuede dehwe rine zvakawanda zvakanakira, senge hunyoro hwakanaka, yakashongedzwa dhizaini, izere ruvara, yakasimba / yakasimba kuramba, nyore kuchengetedza, nezvimwe.
Yakapfava uye Yakasimba Mota Microfiber Suede Leather yeAuto Interiors
Microfiber suede dehwe chigadzirwa chemhando yepamusoro kazhinji, asi kwete nekuda kwezvikonzero zvakafanana nemamwe marudzi eganda. Uye ndiko kupfava uye kutapurika izvo zvinokosheswa kwazvo.
Hydrolysis Resistant Waterproof Suede PU Yakagadzirwa Microfiber Leather
Alcantara kutsiva ine yakanakisa mapurasitiki uye inogona kuitwa mu: mudhiraivho: vhiri reHuracan rakaputirwa neAlcantara kutsiva pamativi ese maviri kunatsiridza kunzwa uye kuwedzera kukakavara, zvemukati mapaneru, zvigaro, lining (mabhegi ematehwe, zvishongo zvebhokisi lining inozoshandisa zvakare Alcantara), zvigadzirwa zvemagetsi, (Surface Pro 4's keyboard chikamu chinoshandisa Alcantara kutsiva zvinhu)
Tsvuku Microfiber Suede Synthetic Goat Kuteedzera Suede Cars Leather
Microfiber dhayamita idiki kwazvo, saka kuomesa kwayo kuomarara idiki kwazvo, iyo fiber inonzwa inonyanya kupfava.
Yakanaka Hunhu Auto Auto Suede Mucheka PU Microfiber Leather
Suede inogadzirwa ne microfiber uye ine yakapfava pamusoro.
0.7 - 0.8mm Ukobvu Wemotokari Yemukati Machira Machira Zvishandiso
Bensen ndeye eco-inoshamwaridzika faux suede yekugadzira fekitori iyo inogona kupa akasiyana siyana masitaera uye mavara efaux suede. Inofananidzwa neganda chairo, faux suede ine zvirinani abrasion kuramba, kushorwa kwemvura, kusvibiswa nekusviba uye mweya kubvumidzwa. Iyo ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzekushongedza kwako mota.